Kooxda Barcelona oo isku dayi doonta inay dib ula soo saxiixato Neymar Jr… (Goorma ayay u dhaqaaqi doontaa?) – Gool FM
Kooxda Barcelona oo isku dayi doonta inay dib ula soo saxiixato Neymar Jr… (Goorma ayay u dhaqaaqi doontaa?)
Haaruun December 24, 2019
(Barcelona) 24 Dis 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa isku dayi doonta inay dib ula soo saxiixato Neymar Jr xagaaga soo socda.
Blaugrana ayaa la warinayaa inay qarka u saaran tahay inay markale sii waddo dadaalka ay ugu jiro inay dib ugu soo celiso xiddigan reer Brazil garoonka Camp Nou sanadka 2020.
Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Kooxda Barcelona ay isku dayi doonto inay dib ugu soo celiso garoonka Camp Nou oo ay markale xagaaga soo socda isku daydo inay ka soo qaadato laacibkan naadiga Paris Saint Germain.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ayaa weli doonaya inuu dib ugu soo laabto Catalunya, kooxda Blaugrana ayaana la fahamsan yahay inay isku dayi doonto oo ay wadahadallo la gasho naadiga reer France weliba heshiis dhan 180 milyan oo euro oo u dhignata 200 milyan oo dollar ama 154 milyan oo gini dhamaadka xilli ciyaareedka.
Neymar ayaa dhaliyey siddeed gool, waxaana uu dhiibay ama caawiye ka ahaa afar gool oo kale oo uu horyaalka Ligue 1 u ciyaaray kooxdiisa PSG qeybta hore ee xilli ciyaareedkan 2019-20.
Labo ka mid ah Kooxaha ka dhisan dalka Talyaaniga oo ku tartamaya saxiixa daafac ka tirsan Arsenal
Pep Guardiola oo si cad uga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Manchester City